ကျူးဘားကုမ္ပဏီ Cubacel ကို 1991 ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ETCSA ၏ ဌာနတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အဓိကမြို့ကြီးများကို လွှမ်းခြုံကာ 2G GSM နှင့် WCDMA 3G လွှမ်းခြုံနိုင်သော ဆဲလ်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၎င်းသည် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ခေါ်ဆိုမှုများ၊ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်အတွက် မိုဘိုင်းဒေတာ၊ MMS၊ SMS၊ လက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းမှု၊ ရိုမင်နှင့် အီးမေးလ် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။. Cubacel တွင် ၎င်း၏ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားရှိပြီး သင်ပြောသည့်အတိုင်းသာ ပေးချေနိုင်သည်။.
Cubacel ဖြင့်၊ 2018 ခုနှစ်မှစ၍ မိုဘိုင်းကွန်ရက်မှတဆင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အားပြန်သွင်းရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာများ၊ ကတ်များနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာရုံးများမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်မှ အားပြန်သွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Cubacel ဖြင့် မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။. ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ၊ ရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုစီဖြင့် အားပြန်သွင်းနည်းကို လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Cubacel ဖြင့် မိုဘိုင်းအား အားပြန်သွင်းနည်း
သင်သည် ကျူးဘားနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ကျွန်းပေါ်တွင် ဆွေမျိုးများရှိနေပါက ချိတ်ဆက်နေရန် သင့်မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ဤသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Cubacel အား ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းဖြင့် စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာပါမည်။အလွန်လွယ်ကူပြီး ဘေးကင်းပါသည်။
၎င်း၏ဖောက်သည်များ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် Cubacel သည် မတူညီသော မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းမှုပုံစံများကို ပေးဆောင်သည် ၊
ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် ငွေဖြည့်ကတ်များဖြင့် ပမာဏများစွာအတွက် သင့်မိုဘိုင်းသို့ လက်ကျန်ငွေထည့်နိုင်သည်။ 5၊ 10 နှင့် 20 ကျူးဘား ပီဆိုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။. အားပြန်သွင်းရန် တန်ဖိုးရှိသော ကတ်တစ်ကတ်ကို သင်ရယူပြီး နောက်ကျောတွင် ပေါ်လာသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
ဤကတ်များကို ETECSA ကုန်သွယ်မှုကွန်ရက်တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ရိုးရာနည်းဖြင့် အားပြန်သွင်းရန် အမှတ်တံဆိပ် * 666 ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားပြန်သွင်းလိုပါက maraca အော်ပရေတာ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ * 662 * ကော့ဒ်။ အသုံးပြုခွင့် #
သင်တိုက်ရိုက်ငွေပြန်သွင်းလိုပါက သင်၏ငွေဖြည့်ကတ်ကိုဝယ်ရန် ETECSA စီးပွားရေးရုံးသို့သွားပါ သို့မဟုတ် Transfermóvil အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်၊ အနည်းဆုံး5Cuban ပီဆိုအဖြစ် ပြောင်းနိုင်သောငွေပမာဏကို အနည်းဆုံးပမာဏတစ်ခုဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
Transfermóvil ဖြင့် အားပြန်သွင်းပါ။
Transfermóvil သည် ETECSA ပိုင်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Android စက်ပစ္စည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ချက်ထိရုံဖြင့် လွယ်ကူပြီး လုံခြုံသောစနစ်သို့ သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အများပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲပါ။.
အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အောက်ပါတို့ကို သွားပါ။ ETECSA ဝဘ်ဆိုဒ် နှင့် "ကိုနှိပ်ပါ"Transfermóvil လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။” အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် 4.4 ထက်ကြီးသော operating system ဗားရှင်းနှင့် သင်ပိုင်ဆိုင်သည့် Bank မှ motherboard တစ်ခုပါရှိသော ဖုန်းတစ်လုံး လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။
Micro-refills တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကြိုတင်ငွေပေးဖုန်းလိုင်းသို့ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု, ပင်မလက်ကျန်ကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် Transfermóvil နှင့်နိုင်ငံတွင်းဖြန့်ဖြူးသူများမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤဝင်ငွေသည် 1 မှ 4.99 CUC သို့သွားနိုင်သည်။
သင့်တွင် အင်တာနက်ပါသော ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိလျှင် အားပြန်သွင်းခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး လုံခြုံမည်ဖြစ်သည်။ Cubacel သည် ဝဘ်မှ သင့်တယ်လီဖုန်းလိုင်းသို့ ငွေသွင်းနိုင်သည့် တရားဝင်ဆိုက်များစွာနှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ-
2019 ခုနှစ်မှစတင်၍ ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်လာသောလက်ကျန်သည် Cubacel ၏ကြိုတင်ငွေပေးမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ကျူးဘားသို့ ပြောင်းနိုင်သောပီဆို ၁ သို့မဟုတ် ၂ ကို ကြိုနိုင်သည်။ သင့်ဆဲလ်ဖုန်းမှ *1# ကိုနှိပ်ပြီး ရွေးချယ်မှု2ကိုနှိပ်ပါ။
ကဏ္ဍရှိ Cubacel ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း ဤဝန်ဆောင်မှုကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကြှနျတေျာ့အကောင့် နှင့် Transfermóvil မှ။ သို့သော် ၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ရန် သင်သည် အချို့သော အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီရမည်၊ ယင်းတို့အနက်မှ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ဆိုင်းငံ့ထားသော တိုးတက်မှုများ မရှိပါ။
လက်ကျန်ငွေ ၃ ဆင့်အောက် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။
ရနိုင်သော မိနစ်များ၊ SMS သို့မဟုတ် Money ဘောနပ်စ်များ မရရှိပါ။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်လအတွင်း အားပြန်သွင်းခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ရှိပြီး ကျူးဘားသို့ အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပါက၊ ယခုအခါ နိုင်ငံအများအပြားတွင် တွေ့ရနိုင်သော မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာအချို့မှ ၎င်းကို စပိန်၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ ကနေဒါ၊ အီတလီ၊ ယူနိုက်တက်၊ ဘုရင့်နိုင်ငံ၊ ဘဟားမားနှင့် အီကွေဒေါ။
အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် ပြန်လည်အားဖြည့်ရန် သင့်စိတ်တိုင်းကျရှိပါသည်- စတိုးဆိုင်များ၊ kiosks၊ ခေါ်ဆိုရေးစင်တာများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီများ၊ Walmart စတိုးဆိုင်များ၊ Fullcarga အရောင်းအ၀ယ်များ။ ငွေပြန်သွင်းရန် သင်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်များမှာ ခရက်ဒစ် သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်ကတ်များဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။.
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » Cubacel ဖြင့် မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ပါ။